Mpahay lalàna, mpiaro ny zon’olombelona… : « Mampirongatra ny fitsaram-bahoaka ny kolikolin’ny mpitondra » | NewsMada
Mpahay lalàna, mpiaro ny zon’olombelona… : « Mampirongatra ny fitsaram-bahoaka ny kolikolin’ny mpitondra »
Par Taratra sur 20/03/2017
« Tsy foana fotsiny ny fitsaram-bahoaka, fa foanana ny antony mahatonga azy: ny tsy fandriampahalemana ary ny ao amin’ny fitsarana sy ny fitandroana filaminana. Raha tena hiady amin’ny fitsaram-bahoaka, tsy vitan’ny kabary, lalàna, seminera. »
Io ny nambaran’ny mpahay lalàna, minisitry ny Fitsarana teo aloha, Imbiki Anaclet, tamin’ny vela-kevitra teny Faravohitra, afakomaly. Tsy maintsy fitsaram-bahoaka sa misy vahaolana hafa azo atao, raha misy olana eo amin’ny fiarahamonina?
Tsy mijery fotsiny ny tsy fandriampahalemana sy ny firoboroboan’ny kolikoly ny vahoaka. Raha tiana hofoanana ny fitsaram-bahoaka, tsy maintsy misy vahaolana hafa hahazoan’ny vahoaka miaro tena: ny Dina izay nivoaka avy amin’ny vahoaka ary efa nataony.
Mahatezitra vahoaka ny fanamparam-pahefana
« Mahatezitra vahoaka ny ataon’ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana. Efa tsarain’ny vahoaka ny rafitra misy, matoa tsarainy ny zandary sy ny polisy », hoy ny avy amin’ny CNIDH, Rasamoely Andrianirainy. Misy mpitandro filaminana mamono fotsiny amin’izao koa, nefa tsy sazina. Mahasorena vahoaka izany.
Eo koa, ohatra, i Jean Pierre nodarohin’ny zandary teny Ankatso. Nakarina ho jeneraly ilay nanome baiko, fa tsy voasazy. « Ahoana no tsy hahatezitra vahoaka amin’izany? » hoy izy. Misy olona tazonin’ny mpitandro filaminana elaela tsy amin’ny antony. Rehefa tsy mahatanty ny havany, manome vola.
Vahaolana ny fampahafantarana sy ny fampiharana lalàna ho an’ny rehetra, famakiana bantsilana ny tsy mety, fanafoanana ny kolikoly, fampiharana dina, tsy tokony hisy tahotra valifaty… Tsy ampy ny fanasaziana ho ohatra fakan-tahaka amin’ny vahoaka. Ho sahy ve ny fanjakana?
Mahatonga fitsaram-bahoaka koa ny fahantrana
« Ny fahantrana sy ny kolikoly no mampirongatra ny fitsaram-bahoaka », hoy ny mpanao gazety, Rakotondrasoa Fetra. Inona, ohatra, no nandehanan’ny polisy roa dia an-tongotra 130 km tany Antsabakary? Tsy raharahana dokotra, fa misy zavatra hafa: kolikoly. Nahatezitra vahoaka ny fihetsik’ireo polisy teny an-dalana: naka volan’olona, nandrava fananan’olona.
Eo koa ny fahantrana: diso fanantenana ny vahoaka, raha ny fitsaram-bahoaka nahazo ireo mpizahatany tany Nosy Be, ohatra. Azon’ny fitondrana hararaotina hamerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny « Raharaha Antsakabary« , raha tena mampihatra lalàna izy: mitovy lenta ny namono ireo polisy sy ireo nandoro sy nandroba tanàna, nampijaly…